यो सानो फूलले केही दिनमै तपाइँलाई बनाउँछ मालामाल!, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
यो सानो फूलले केही दिनमै तपाइँलाई बनाउँछ मालामाल!
एजेन्सी। हिजोआज मानिस कुनै न कुनै तनावले घेरिएको हुन्छ। कसैलाई धन सम्पत्तिको चिन्ता हुन्छ भने कसैलाई सन्तान प्राप्तिको चिन्ता हुन्छ। तर भाग्यका कारणले गर्दा मानिसलाई आफूले चाहेको जस्तो परिणाम प्राप्त हुँदैन। तपाइँको यही समस्यालाई समाधान गर्न आज हामी यस्तो फूलका विषयमा जानकारी दिँदैछौं जसले तपाइँको समस्याको समाधान गर्छ।
यो चमत्कारी फूलको नाम नागकेसर हो। यो फूललाई चढाउँदा भगवान शिव खुशी हुन्छन्। भगवान शिवको कृपाले घरमा समृद्धि आउँछ। सोमबारका दिन नागकेसरको फूल, धेरै बेसार, सुपारीका टुक्रा, केही सिक्का र चामल शिवलिंगमा चढाउनुस्। यो प्रक्रिया प्रत्येक सोमबार गर्नुस्। यसो गर्दा तपाइँको मनोकामना पूरा हुन्छ।
कार्यक्षेत्रमा सफलता र समाजमा मान सम्मान पाउनकाला िनागकेसर, चमेलीको फूल र सिन्दुरलाई मिलाएर चन्दन बनाउनुस्। विहान नै स्नान गरेर आफ्नो निधारमा उक्त चन्दन लगाउनुस्। यसो गर्दा भगवानको कृपा तपाइँमाथि रहन्छ। यसो गर्दा व्यक्ति तेजस्वी र बलशाली हुने विश्वास छ।
गर्भवती महिलाले नागकेसरलाई सुपारीको धुलोसँग मिलाइर सेवन गर्दा फाइदा हुन्छ। यसले शारीरिक कमजोरी र अक्षमता हराउँछ। यसले गर्भ रहनलाई सजिलो बनाउँछ।